Inkabadan shan milyan oo ka tirsan carruurta Yaman oo wajahaya macaluul - BBC News Somali
19 Sebtembar 2018
Lahaanshaha sawirka MOHAMMED AWADH/ SAVE THE CHILDREN
Hay'adda samafalka ee Save The Children ayaa sheegaysa in hal milyan oo ka mid ah carruurta dalka Yaman ay halis ugu jiraan macaluul, xilli qoysas badan oo reer Yaman ah ay la daalaa dhacayaan sidii ay u heli lahayeen cunnooyinka daruuriga ahi iyo sidoo kale sidii ay carruurtooda xanuunsan ku gaarsiin lahaayeen xarumaha caafimaadka.
Hay'addani Save The Children ayaa sheegeysa in boqolaal kun oo carruur ah ay haatan wajahayaan halis, xilli colaad hor leh ay ka soo cusboonaatay magaalada Xudeyda.
Qaramada Midoobey horey uga digtay in dalkaasi Yaman ay ka dhacdo jaagadii ugu xumeyd taariikhda, waa haddii bey tiri aan la helin keyd cunto, shidaal iyo sidoo kale gargaarka kale ee bani'aadanimo.
Qiima dhaca ku yimid lacagta dalkaasi Yaman iyo burburka dhaqaale ee dalkaasi uu wajahayo ayaa qoysas badan halis u gelinaya gaajo iyo dhibaatooyin caafimaad, sida lagu sheegay warbixinta hay'adda the Save The Children.
Maxaa looga aamusay carruurtii lagu laayay Yaman?
Golaha Ammaanka oo dalbaday baaritaan ka dhan ah duqeyntii carruurta Yaman
Magaalada Xudeyda oo ay ku taal dekadda ugu weyn dalkaasi Yaman ayaa mid ka mid ah 25-kii cannug ee da'dooda ka yar tahay shan sano waxa uu wajahayaa nafaqadarro ba'an.
Colaadda dalkaasi ka jirta ayaa u suurtagelin la' carruur badan in la gaarsiiyo goobaha caafimaadka, iyadoo qoysaska qaarna ayba haysan kharash ay ku daweeyaan carruutooda xanuunsan.
Haweenka iyo carruurta ayay haysataa dhibaatada ugu ba'an ee haatan ka jirta dalkaasi.